Banaanbax looga soo horjeedo dilkii dhalinyarada oo ka dhacay Balcad – Radio Baidoa
Shacabka ku nool degmada Balcad ayaa maanta waxaa ay dhigeen dibadbax ay uga soo horjeedeen 8 dhalinyarada ahaa ee shalay Galab meydkooda la soo dhigay tuulada Gololeey,kuwaas oo ahaa Shaqaale Xarun MCH oo ku taalla degaankaas.
Qaar kamid ah Shacabka ayaa Maanta,iyaga oo Madaxa ku xirtay Marooyin Gaduudan waxaa ay socod kusoo mareen wadooyinka degmada Balcad,iyaga oo sheegayay inay aad uga xun yihiin dilkiisii loo geystay dhalinyarada Reer Balcad ee Bulshadooda u adeegayay.
Qaarkood banaanbaxaayasha oo hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan karin in si bareer ah loo dilo saaxibadood oo ahaa dhalinyaro duruufo kala duwan wax kusoo bartay,waxaana Madaxda Dowladda Federaalka ka codsadeen in tallaabo laga qaado dadkii ka dambeeyay dilkaas.
Dad isugu jira siyaasiyiin iyo Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ayaa si kulul waxaa ay uga hadleen dil wadareedka loo geystay dhalinyarada ka howlgalayay Xarun MCH oo ku taalla deegaanka Gololeey ee degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Rabshadihii ka dhashay dilkii Ninkii madowga ahaa oo weli ka socda Minnesota
Dowladda Qatar oo beenisay inay ka baxeyso Golaha Iskaashiga Khaliijka